Shina Heshida mivarotra mafana be azo sasana ary manohitra ny famelezana ho an'ny mpanamboatra rindrina fanaka anatiny Meihe
Mon - Sat: 24 ora
Loko loko anatiny
Super madio & vaovao anatiny
Ringan-drano mafampana azo trandrahana super
Halavan'ny rindrina anatiny
Gorodona vita amin'ny gorodona
Heshida mivarotra mafana be azo sasana ary manohitra ny famelezana ho an'ny rindrina fanaka anatiny
Salama, tongava hitsidika ny vokatrao!
Heshida Madio sy Vaovao Inn ...
Heshida Fahasambarana Dry Powde ...
Fitambaran'entana: 100-120 Square Meter / 10kgs
Tany maina: Telopolo ~ Dimampolo (30 ~ 50) Minitra.
Manintona ny atiny: Avelao ny Telopolo ~ Dimampolo (30 ~ 50) Minitra Alohan'ny Bataly.
Maina amin'ny alàlan'ny: Dimy (5) Andro
Fahalemena sarimihetsika maina: 0.2-0.3mm / Coat
Fomba fampiharana: Fanaovana hoso-doko, Roller na Airless Spray.
Fonosana: 5kgs / Bag, 2bags / Bucket
poizim: Ny taham-pon'ny vovo-dronono ho an'ny rano dia 1: 1.4 ~ 1: 1,6.
Valiny misy: Misy loko fototra 9, afaka mampiasa ireo loko fototra 9 misy ny endrika mahazatra mba hahazoana loko tianao.
Heshida Fandroana mahery sy fanohanana ny rano anatiny amin'ny rindrina mandoto vovoka amin'ny rano azo ampiasaina amin'ny endrika iraisam-pirenena momba ny fanavaozana iraisam-pirenena, tsy misy fandotoana ny tontolo anatiny sy ivelany. Sarimihetsika miloko loko fotsy fotsy mahery vaika hamatsiana fananana mikoriana tsara, indrindra mety ho an'ny haingon-trano sy sary hosodoko avo lenta.
Izy io dia mety ho an'ny takelaka avo lenta ambony amin'ny rindrina toy ny rindrina anatiny, valindrindrina, mivaingana, birao gypsum, rafitry ny biriky, birao Asbestea ary koa ny sisa.
1. Voc, Formaldehyde maimaim-poana, Benzene, Lead, Mercury tsy hita;
3. Ny sarimihetsika dia henjana sy matevina;
4.Super White Paint Film;
5. Hery manafina sy maharitra;
6. Famonoana afo A2.
Torolàlana ho an'ny fampiasana:
WaterManampy rano mankany amin'ny 2-3cm Etsy ambanin'ny haavon'ny haavon'ny rindrina ao anaty rindrina.
BagsPour 2 Bag de p gilgara, voajanahary voajanahary ho an'ny minitra iray.
③Mandeha amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta miaraka amin'ny mixer elektrika ho an'ny kely indrindra 8 minitra.
OffManary ny fitaovana mitsingevana miaraka amin'ny loha maintso ary mandro 2 mandritra ny 3 minitra.
⑤Nampidiro rano mandra-pahatongan'ny 10 ~ 15 Cm avy any an-tampon'ny andaniny. Mampiasa indray ny foza mandritra ny 30 segondra Ny tampon'ny tampon'ilay andian-dàlana, ny taham-pon'ny vovo-dronono ho rano 1: 1,4
⑥Mandeha mandritra ny 30 minitra (avelao mandritra ny 1 ~ 2 ora tsara kokoa)
Ir Mihetsi-po miaraka amin'ny tapa-doko na blender, ary avy eo asio sivana miaraka aminny efijery misy fanjairana manokana mandritra ny 2 na 3 fotoana, azonao atao ny mampiasa azy.
Previous: Heshida madio sy ny loko anaty rano rindrina anatiny
1.Question: Ohatrinona no ilaina ny handokoana ny efitranoko?
Valiny: Ho an'ny hosodoko rindrina anatiny, ny 10kg dia afaka manosika manodidina ny 100-120 aorian'ny fanosotra indroa.
2.Question: firy KG ny vovony afaka mametraka anaty ctnr 20 '?
Valiny: Azontsika atao ny mampiasa baoritra ho an'ny fanaovana vovobony hosodoko, ary ny siny dia misaraka, mametaka ny siny mba hiarovana ny habakabaka, afaka mameno vovoka 8600kgs sy boaty 860 ao anatin'ny 20'ctnr.
3.Question: Hafiriana no handokoana ny loko eo anelanelan'ny palitao?
Valiny: Ny habetsaky ny fotoana itiavany ny loko ho maina dia miankina amin'ny tranga ivelany ivelany toy ny mari-pana amin'ny efitrano sy ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa ny maina dia ho maina ao anatin'ny 30-50 minitra. Na izany aza, ny coatings dia manasitrana tanteraka amin'ny dimy (5) andro na inona na inona karazana.
4.Question: HESHIDA® ve ny loko anatiny tsy misy loko?
Valiny: Ny hosodoko anatiny dia sariaka sy loko hoso-doko.
5.Question: Misy baiko tsara ve rehefa manao sary hosodoko na efitrano?
Valiny: rehefa mandoko efitrano dia natokana hanomboka amin'ny valindrihana. Arahin'ny rindrina, trims ary fiasana. Ary farany, ny gorodona rehefa ilaina.
6.Question: Misy baiko tsara ve rehefa manao sary hosodoko?
Valiny: mitovy amin'ny hosodoko hosodoko, rehefa mandoko ny firafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafi-panabeazana dia averina izy amin'ny manomboka ambony indrindra. Tandava isak'andro, mihetsika iray. Farano amin'ny alàlan'ny sary hosodoko.
7.Question: Inona no ataoko amin'ny fandokoana sisa?
Valiny: Raha manana loko na simika sisa tavela ianao, dia tsy tokony hatsipy any anaty rano maloto na rano misokatra. Azonao atao ny manolotra azy ireo amin'ny asa soa.
8.Question: Ahoana no ahafahako mpivarotra / mpaninjara ny HESHIDA® Paints?
Valiny: Ho an'ny mpivarotra / mpaninjara momba ny raharaham-barotra / mpandraharaha, dia afaka miara-mientana aminay ianao amin'ny alàlanay handefa ny anaranao feno, adiresy, antsipirihany mifandray ary fangatahana amin'ny wangyanzhao@hebeicopihue.com na shiner@hebeicopihue.com
Ny loko hosodoko anatiny
Fahatsiarovana amin'ny rindrina
Adiresin'ny orinasa: No.3723 Làlana lehibe avaratra amin'ny rindrina, Baoding, Hebei, Sina.
Adiresy ny birao: No.36 Lalana avaratra Shihuo, efitrano plaza Zhongyuan 1301, Distrikan Xinhua, Shijiazhuang, Hebei, Sina.
Miss Shiner: Mpiandraikitra ny varotra
Andriamatoa Wang Yanzhao: Tale jeneraly